Nke a bụ egwuregwu kachasị mma anyị nwere na playoffs. Ndị na-egwu egwu dị iche iche na aja aja na m chere na ụlọ ahụ ga-ada. \_ "Dị ka ndị ọrụ mmanụ na-abanye na ngbanwe nke na-ewugharị, ọkụ na-enwu gbaa Edmonton nwere afọ iri. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ abalị pụrụ iche na mgbapụta rexall na mgbapụta nke na-adịbeghị anya.
\_ "Ruo ugbu a, nyocha anyị emebeghị ka anyị kwenye na Tosia machibidoro Soshibin site na 1982, \_ 'Store ahịa bịara mgbe ndị Russia kwupụtara mmasị na ụfọdụ ndị America. A na-etinye ngwa ọrụ ha doro anya na enwere ike ị nweta atụmatụ ahụ na 1979, ma ọ bụghị ruo mgbe 1979 na Russia malitere ịdị elu iji mee ka ndị na-enye ohere dị elu, ma njikọ abụọ States na Russia na-anwa ịchọpụta otu n'ime isi mkpọtụ nke mkpọtụ mmiri iji soro ụgbọ okpuru mmiri ọ bụla.
Anyị ga-elekwasị anya na grills na mmanụ ọkụ. Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịmatakwu banyere ihe na-egbu egbu, biko gaa na mkpokọta nke anụmanụ. com. Nnukwu ọdịiche dị n'etiti unyi na grill bụ nnukwu nsogbu, na nke ahụ. Charcoal Grill ga-abụ ihe dị ọnụ ala karịa. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta obere ihe na-egbu egbu, ị nwere ike ịzụta otu maka $ 30, nke zuru oke maka ndị na-adịghị na ya ma ọ bụ nwee obere ụlọ ma ọ bụ nwee obere ụlọ.